Nbudata Master Royale DM maka gam akporo (MOD) - Luso Gamer
Nbudata Master Royale DM maka gam akporo (MOD)
Ndị egwuregwu anụlarị maka Clash Royale bụ egwuregwu egwuregwu ịntanetị. Ma ọtụtụ n'ime pro akụrụngwa gụnyere ngwá agha na-categorized na premium ngalaba. Ya mere, na-elekwasị anya na ịnweta ihe ndị ahụ n'efu ma dị mfe, ebe a anyị wetara Master Royale DM.
Ọtụtụ ndị egwuregwu wụnyela ma lụọ ọgụ n'ọgbọ agha. Nwere ike nweta nsogbu nnweta akụrụngwa ndị a. N'ihi na ọtụtụ n'ime ego akụrụngwa na-categorized na premium ngalaba. Yabụ na ịnweta akụrụngwa ndị ahụ nwere ike ịchọ ndenye aha.
Mana ebe a n'ime ụdị modded a, ihe niile dị oke ọnụ gụnyere akụrụngwa nweere onwe ị nweta. N'ihi ya, ị na-achọ ebe nchekwa dị n'ịntanetị maka nbudata egwuregwu modded. Mgbe ahụ, anyị na-akwado ndị egwuregwu gaa na webụsaịtị anyị wee budata ya Egwuregwu Mod n'ihi na free.
Kedu ihe bụ Master Royale DM Apk
Master Royale DM gam akporo bụ ụdị modded n'ịntanetị nke mbụ Clash Royale. Ebe akụrụngwa gụnyere pro skins enweghị oke. Nke kachasị ụdị egwuregwu egwuregwu gọọmentị na-amanye ndị egwuregwu itinye ego maka imeghe ihe pro.
Ọpụrụiche banyere egwuregwu egwuregwu a na-enye nhọrọ a dị elu iji hazie oche ebe agha ha. Na mbido, a kpọchiri akụrụngwa gụnyere ihe mgbako na gburugburu n'ime ụlọ ahịa. Nke pụtara na ndị egwuregwu nwere ike ịchọ ka ha kpọghee akụrụngwa ndị ahụ.
Na mbido, akụrụngwa dị ala ma nyere aka imeghe ihe ndị nwere oke. Ma ọnụ ọgụgụ ndị dike a na-enweta n'ọgbọ agha dịkwa ole na ole. N'ihi ya, iji kpọghee ndị dike na ike, ndị egwuregwu na-atụ aro ka ha sonye n'ọgbọ agha n'oge.
Mana na oke ego gụnyere ndị dike, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume imeri egwuregwu ọ bụla n'ime egwuregwu. N'ihi ya, imeghe ihe dị adị n'efu gụnyere ngwa ọgụ. Ndị mmepe mechara egwuregwu Mod a ebe ewepụrụ ihe mgbochi niile gbakwunyere iwu.
aha Nna-ukwu Royale DM
Aha ngwugwu net.master.royale
Ihe bara nnukwu uru, mkpụrụ ego ọla edo na ọnụ ahịa King Points juputara na akụrụngwa. Ọbụlagodi na ịchọrọ ịmejupụta counter gị ọzọ, anyị na-akwado ndị egwuregwu ịmalitegharị egwuregwu ahụ. N'ime ịmalitegharị egwuregwu ahụ, ọ ga-ejupụta counters na-akpaghị aka.
Ịghọ atụmatụ nna ukwu n'ime ebe agha pụtara ọtụtụ ihe maka ndị Fans. N'ihi na ka akara gị na-akawanye mma n'ụwa niile, ọ ga-emecha gosipụta ezigbo atụmatụ atụmatụ nke gị. Enwere ike ịbawanye isi ihe na arụmọrụ.
Ka e were ya na ọ bụrụ na ị nweghị ihe ịga nke ọma n'ịkwado arụmọrụ gị n'ime ogige agha. Mgbe ahụ akara gị ga-ada ozugbo wee mee ka ọkwa dị ala n'ụwa niile. Cheta akụrụngwa gụnyere kaadị n'ime mod gameplay enweghị ngwụcha.
Ma mgbe a bịara n'ịgba egwu na atụmatụ ụlọ, mgbe ahụ ọ na-achọ uche dị nkọ nke nwere nkà ngụkọ dị mma. Ọ bụrụ na ịgaghị nke ọma na mgbako ike gụnyere nọmba ndị mmegide. Mgbe ahụ ị nwere ike mebie n'ọgbọ agha ahụ.
N'ihi ya, ị dị njikere ịnụ ụtọ Ịkpọghe ngwa agha dị ike dị iche iche gụnyere ndị dike. Na-enweghị nchegbu banyere ihe onwunwe na ego. Mgbe ahụ anyị na-akwado ndị egwuregwu gam akporo wụnye ụdị nbudata Master Royale DM kacha ọhụrụ.
Dị mfe n'ihe gbasara egwuregwu.
Ịmekọrịta mod egwuregwu na-enye akụrụngwa na-enweghị ngwụcha.
Nke ahụ gụnyere Skins, Heroes, Power, Gems, na ndị ọzọ.
A na-akwalite mkpụrụ ego ọla edo na akara eze ruo na njedebe ikpeazụ.
Egwuregwu interface yiri nke mbụ na enyi na enyi.
Otu esi ebudata Master Royale DM Apk
N'ime Ụlọ Ahịa Google Play, ndị egwuregwu nwere ike ibudata egwuregwu mbụ. Ebe iwu na-egbochi ma ihe onwunwe dị oke. Ma mgbe ọ na-abịa nbudata na modded version of gameplay mgbe ahụ si n'ebe ọtụtụ weebụsaịtị na-ekwu na-enye Mod Apk.
Mana n'eziokwu, weebụsaịtị ndị ahụ gụnyere ikpo okwu na-enye faịlụ adịgboroja na ndị mebiri emebi. Yabụ kedu ihe ndị ọrụ android kwesịrị ime n'ụdị ọnọdụ ahụ mgbe onye ọ bụla na-enye faịlụ adịgboroja? N'ihi ya, n'ọnọdụ dị otú ahụ, anyị na-akwado gamers ka anyị na webụsaịtị ma nweta authentic mod ngwa faịlụ.
A na-ewere ntinye na ntinye nke egwuregwu modded dị ka ihe ize ndụ. N'ihi na ọtụtụ faịlụ modded nwere ike ịnweta n'ịntanetị nwere ike ịnwe malware. Nke nwere ike ibute nnukwu mmebi na smartphones android. Agbanyeghị, anyị wụnye egwuregwu mod ahụ ma ọ nweghị nsogbu ọ bụla.
A na-ebipụta ọtụtụ atụmatụ dị iche iche na egwuregwu eme ihe ebe a na webụsaịtị anyị. N'ihi ya, ị nwere mmasị ịnụ ụtọ egwuregwu ndị ọzọ yiri ya wee soro njikọ ndị a. Kedu ndị bụ Alaeze Ukwu Ọnụma ngwa na Clash Mini Apk.
Ị na-egwu Clash Royale ogologo oge ma ị nweghị ike ịghọ onye ọkpụkpọ ọkachamara n'ihi oke ego. Mgbe ahụ echegbula n'ihi na ebe a anyị wetara a zuru okè modded version na aha Master Royale DM Apk. Nke ahụ na-enye akụrụngwa na ndị dike na-enweghị ngwụcha n'efu.
Categories Strategy, Egwuregwu Tags Nna-ukwu Royale DM, Nna-ukwu Royale DM gam akporo, Master Royale DM Apk, Nbudata Master Royale DM, Egwuregwu Mod Mail igodo
Nbudata Dum TV Apk maka gam akporo [Ihe nkiri]
Budata Movcine Apk Maka gam akporo [Ihe nkiri+IPTV's]